Ramano be Galona 7. Ny akama toa ts mino oe sika roa mpifankatia. Tiako ianao [ Landry Rpj ] Couplet1: Ramano be Galona 6. Milay be i Spy-D e!
Agrad sy Skaiz 6 7. Tanjaka Miarahaba, Hatrizay ka mandraka androany dia milaz Mba mila fanampiana azafady ô! Tanora Masina Itaosy 5 8. Nefa izy tena mahay miteny Francais be mihintsy taloha fa zao ho izy dia mijaly be izy rehefa mamoaka zavatra tiany resahana. Marihina fa io version maimaim-poana io dia mila tenimiafina maimaim-poana manokana code miova isam-bolana. Mr Sayda Misié Sayda 10 2.
Ho namako ianao feat Twokii 13 Tompontanana [ Tence Mena ] ahahah ye, oyeah,ahh Taratasy jiaby am anarako tsara ho anao Dossier jiaby ampelatagnako ambarao havanao….
Tiako ianao [ Landry Rpj ] Couplet1: Toa ory ny fanahy, Raha mibanjina, Ny adim-piainana Izay mihasarotra, Aza mitanondrika. Mpandresy [ Antsan’i Fenomanana ] Mahatsiaro trotraka! Ramano be Galona 7.
Efiko parsi 19 5. Tsy izany mantsy fa misy namako mipetraka aty a France izy dia milaza izy hoe very very ho izy ny sainy indrindra rehefa miresaka na manazava zavatra dia tsy tafavoakany lay zavatra tiany tenenina.
Ttononkira vao tonga 1. Avelao oa zah, avelao oa zah e! Mpandresy [ Antsan’i Fenomanana ] Mahatsiaro trotraka! Raha mampiasa ny tonomkira gratuite ianao dia azonao alaina any amin’ny Cyber ny code fa tsy voatery jerena amin’ny telephone.
Valim-pitiavana ho an’i Fanaik Efiko parsi 19 5. Slt,fa maninona ilay fichier aplication tononkira no tsy mety telechargena intsony e. Tanora Masina Itaosy 5 8. Efa ho 4taona ho izy nitrangany le zavatra fa tsy hita mihntsy ny tena marina.
Mitia mangina 19 3. Toa ory ny fanahy, Raha mibanjina, Ny adim-piainana Izay mihasarotra, Aza mitanondrika. Efa seraseta daholo ny Scaner ny aty doha fa tsy misy aretina. Agrad sy Skaiz 6 tonpnkira. Maratra [ Inox ] Indraindray aho malomaloka mandinika matsiaro ireo tambitambinnao Tamin’ ireny aho tsy nahalala akory…. Raha ohatra moa tsy afaka mampiasa Google Play dia alaivo eto ny fichier apk. Valim-pitiavana ho an’i Fanaik Raha hampiditra tononkira dia mandehana eto.
Raha hampiditra tononkira dia mandehana eto. Salama daoly, Tsy mety le code nalaiko tato fa misy foana hoe « diso ny code napetrakao ». Ramano be Galona 7.
Hira be mpitia 1. Jereo eto ny lisitry ny mpihira ka raha tsy ao ny mpihira dia ampidiro eto na mitadiava tononkira eto.
Ramano be Galona 6. Tondrom-peo vao tonga 1.
Takelaka misy ireo tononkira malagasy. Marihina fa io version maimaim-poana io dia mila tenimiafina maimaim-poana manokana code miova isam-bolana. Adala an’i jesosy 14 8.